LEGO Minifigures 71031 ကိုအနီးကပ်ကြည့်ပါ Marvel စတူဒီယို Loki
24 / 08 / 2021 24 / 08 / 2021 ခရစ် Wharfe 344 Views စာ0မှတ်ချက် 71031 Marvel စတူဒီယို, သေစားသေစေသောစည်းဝေးပွဲ, Avengers: နောက်ဆုံးအခြေအနေဟာ, Black ကမုဆိုးမ, Captain America, စုဆောင်းထားသောအသေးစား, Disney+, Hawkeye, hulk, သံမဏိလူသား, အောင်နိုင်သူ Kang, Lego, Lego စုဆောင်းထားသောအသေးစား, Lego မှ marvel, Lego Minifigures, Marvel, Marvel ရုပ်ရှင်ရုံiverseာ, သေးသေးလေး, Thor, Thor: Ragnarok, Thor: The Dark ကမ္ဘာ့ဖလား, Throg
နောက်ကွယ်မှသမိုင်းကိုလေ့လာပါ Lego 71031 Marvel စတူဒီယိုLoki နှင့် Brick Fanatics ဤတံဆိပ်သစ် minifigure ကိုကျွန်ုပ်တို့၏သီးသန့်မီးမောင်းထိုးပြပါ။
မကောင်းမှုဒုစရိုက်၏နတ်ဘုရားသည်ထိုဇာတ်ကား၌ပထမဆုံးပြသရန်အစောဆုံးဇာတ်ကောင်များထဲမှတစ် ဦး ဖြစ်သည် Marvel Cinematic Universe သည် ၂၀၁၁ ခုနှစ် Thor တွင်ဖန်သားပြင်များပေါ်တွင်ပထမဆုံးပေါ်လာသည်။ Loki Laufeyson (Laufey ၏သား၊ Jotunheim ၌ Frost Giants ၏အုပ်စိုးသူ) အားကြိုးကိုင်။ လှည့်ဖြားသောလှည့်ကွက်တစ်ခုအား MCU ၏ပထမသုံးဆင့်တွင်ဇာတ်ကောင်အတွက်သင်တန်းကိုအဓိကထားခဲ့သည်။
Loki သည်အသစ်ဖွဲ့စည်းထားသော Iron Man, Captain America, Thor, Hulk, Black Widow နှင့် Hawkeye တို့အတွက်ပထမဆုံးရန်သူဖြစ်သည့် Avengers ရုပ်ရှင်ကိုဝန်းရံထားသည်။ Thor: The Dark World, သူသည် Thor နှင့်ခဏတာပူးပေါင်းပြီး Dark Elves များကိုတိုက်ခိုက်ရန်၊ သူကိုယ်တိုင်မသေဆုံးမီအတုခိုးရန်၊ Thor: Ragnarok တွင် Thor နှင့် Valkyrie သည် Hela ကိုအနိုင်ယူရန်ကူညီပေးခဲ့သည်။
ငါတို့ကအဲဒီရုပ်ရှင်ရုံတွေမှာ Loki minifigures တွေအများကြီးရှိခဲ့တယ်၊ ဒါပေမယ့်ဗားရှင်းမှာပါ ၀ င်တယ် 71031 Marvel စတူဒီယို တကယ်ကဒီနှစ်မှာအခြေခံတယ် Disneyစိတ်ကူးယဉ်ဆန်သော 'Loki' + စီးရီး ပထမရာသီသည် Avengers: Endgame ပြီးနောက်အချိန်နှင့်တပြေးညီဖြစ်ပေါ်နေသော်လည်းဖန်သားပြင်ပေါ်မှကျွန်ုပ်တို့မြင်နေရသော Loki သည် Avengers Assemble ၏အဆုံးမှတိုက်ရိုက်ဖြတ်ထုတ်ခြင်းခံရသည်။
သူကအချိန်ဇယားကိုဖန်တီးဘို့ Time Variance Authority ကသူ့ကိုချက်ချင်းမဖမ်းခင် Tesseract နဲ့ထွက်ပြေးဖို့ခွင့်ပြုတဲ့အချိန်ခရီးသွား Avengers တွေကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ Loki ၏ပထမရာသီသည် TVA မှထွက်ပြေးရန်ကြိုးစားသောမကောင်းမှုဒုစရိုက်၏နတ်ဘုရားမနှင့်အချိန်အဆုံး၌ Citadel သို့ရောက်သည်၊ သူသည်မျက်နှာဖုံးများ (spoilers!) Kang the Conqueror နှင့်လာသည်။
ထို့ကြောင့်နောက်ဆုံးပေါ် minifigure တွင် Loki အတွက်ဒီဇိုင်းအသစ်တစ်ခု၊ TVA မတ်ခွက်နှင့်ဂျာကင်အင်္ကျီတို့ပါ ၀ င်သည်၊ သူ၏ကိုယ်ခန္ဓာနောက်ကျောတွင်ပုံနှိပ်ထားသောအသစ်ပုံသွင်းထားသော Throg အပိုပစ္စည်းများပါ ၀ င်သည်။ Throg ကိုသင်သတိမပြုမိပါက Loki TV series တွင်သူ၏အတိုချုပ်ဆုံး cameo ထက်များစွာသာလွန်သော Thor ၏ alternate-timeline frog version ဖြစ်သည်။
အခြားဇာတ်ကောင်များစွာကဲ့သို့ 71031 Marvel စတူဒီယိုLoki ၏နှစ်ဘက်ခြမ်းခေါင်းတစ်ခြမ်းသည်a'ပျော်ရွှင်သောသူရဲကောင်းမျက်နှာ'သို့သော်သူ၏အသစ်ပြန်ပြောင်းထားသောဆံပင်ပုံစံသည်သူ၏ ဦး ခေါင်း၏အခြားတစ်ဖက်ကိုဖုံးအုပ်ထားသောကြောင့်သူသည်အခြားဇာတ်ကောင်နှင့်ပိုလိုက်ဖက်သောမဲ့ရင့်သောအမူအရာကိုရရှိသည်။
ငါတို့ရဲ့ Loki ကိုနောက်တစ်ချက်ကြည့်ပါ အသေးစိတ်သုံးသပ်မှု of 71031 Marvel စတူဒီယိုအထက်ပါဗီဒီယိုတွင်ကစားခြင်းကိုနှိပ်ခြင်းဖြင့် Throg ၏တောရိုင်းနောက်ခံအကြောင်းပိုမိုလေ့လာပါ။ နောက်ဆုံးအသုတ် စုဆောင်းထားသောအသေးစား စက်တင်ဘာ ၁ ရက်တွင်စင်ပေါ်သို့ရောက်ရှိလာပြီး p ကိုရှာနိုင်သည်artLoki အပါအ ၀ င် icular အက္ခရာများကိုကျွန်ုပ်တို့၏သုံးသည် ဖြန့်ဝေလမ်းညွှန်.
ကျွန်ုပ်တို့၏ဇာတ်ကောင်မီးမောင်းထိုးပြမှုများမှအောက်ပါ link များကိုနှိပ်ပါ 71031 Marvel စတူဒီယို သ:
← Lego Star Wars 10178 Motorized Walking AT-AT ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း
ကျွန်ုပ်၏ Nintendo နှင့်အတူ LEGO VIP အမှတ်များအခမဲ့ရယူပါ →